गगन थापाले काँग्रेस बैठकमा रबी लामीछानेकाे बारेमा यस्ताे भने
पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा काँग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापाले रबी लामीछानेको प्रशंशा गरेका हुन्।
पाेखरा १७ भदाै- नेपाली काँग्रेसका युवा नेता तथा पुर्वमन्त्री गगन थापाले टेलीभिजन प्रस्तोता रबी लामीछानेको प्रशंशा गरेका छन् । पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा काँग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापाले रबी लामीछानेको प्रशंशा गरेका हुन्। राज नितीक दलका नेताहरुकै कारण लामीछानेको समर्थनमा जनलहर देखिएको काँग्रेस नेता थापाको भनाई थियो। गगन थापाले यस्ताे प्रशंन्सा गर्दा रबी भावुक भएका छन् ।
उनले भने, ‘राजनितीक दलहरुले जनताको मुद्धा उठाउन नसक्दा जनता रबी लामीछानेको समर्थनमा लागेका हुन।’
‘जनताहरु सरकारमात्र होईन प्रतिपक्षप्रति पनि आक्रोशीत छन्,’ उनले भने, ‘राजनितीक दलहरुले जनताको मुद्धा उठाउन नसक्दा जनता रबी लामीछानेको समर्थनमा लागेका हुन।’ आफ्नै पार्टीले समेत जनताको पक्षमा कामगर्न नसकेको भन्दै उनले थपे, ‘जनता को मु*द्दा कांग्रेसले नबोकेपछि जनताले रवि लामिछाने रोजेका हुन्।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मुख्यालय सानेपामा २२ असारयता लगातार बैठक बसिरहेको छ। गगन थापाकाे साेचमा रबीलाइ राजनितिमा ल्याउने बताएका छन् ।
अन्तरिम संगठन विधान पारित गरेपछि कांग्रेस बैठक भातृ संगठनतिर केन्द्रीत भएको छ। तर, २८ माघयता विघटित अवस्थामा रहेको नेवि संघको अन्तरिम नेतृत्व टुंग्याउन सकेको छैन। बैठकमा नेताहरु महेश आचार्य, प्रदीप पौडेल, रमेश रिजाल, मिनेन्द्र रिजाल मानबहादुर विश्वकर्मा, अर्जुन जोशी, भीष्मराज आङ्दम्वेलगायतले बोलेका थिए। गगन थापाकाे प्रशंसाबाट उनमा बढी हाैसला अाएकाे छ।
श्याम परदेशी गठी प्रकरणमा गगन थापाले उठाए गम्भिर प्रश्न, सबैलाई बनाए सोच्न बाध्य
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगनकुमार थापाले श्याम परदेशी ठगी प्रकरणमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । फेसबुक मार्फत थापाले यो प्रकरणलाई महत्त्वका साथ प्रकाशित गर्ने सबै संचारमाध्यम र तत्काल कदम चाल्ने नेपाल प्रहरीलाई समेत नमन भनेका छन् ।
समाजमा रहेका यस्तो प्रवृतीलाई यसैगरी मिलेर सवैले परास्त गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । यती मात्रै होइन, उनले यो प्रकरणमा तीन प्रमुख प्रश्न समेत उठाएका छन् । घटनाको कारण खोज्न ऐतिहासिक चेतका साथ घटनाको विश्लेषण गर्दा भने कयैन प्रश्न अगाडि आउने उनको भनाइ छ
यस्ता छन् उनले उठाएका तीन प्रश्नः
१. प्रशासन र न्यायप्रणाली श्याम परदेशीहरु प्रति एकपक्षीय र भुइँ मान्छेप्रति विभेदकारी रहदै नआएको भए के यस्ता घटना हुन्थे होलान् ?
२. स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय पहुँच, यी राजनीतिक वाचाहरु उपलब्ध हुन्थे भने के यी नागरिकले यो अन्याय व्यहोर्नुपर्थो ? यी प्रश्नका उत्तर त सजिलै दिन सकिन्छ तर उत्तर होइन अब यो अवस्था बदल्नुपर्छ ।
३. पिडक श्याम परदेशी किन विपन्न, निरक्षर र दलित समुदाय भन्ने बित्तिकै ऋण दिन तयार हुन्थे ? अनि यिनीहरुलाई विपन्न र दलित कसले बनायो ?